Home 1 - JobExpress
အပြိုင်အဆိုင်များ မယ့် Covid 19 အပြီးကာလမှာ Interview ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေမလဲ? 1 day ago
ဆယ်တန်းအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေအနေနဲ့ Goals/Careers တွေအတွက် ဘာတွေကြိုပြင်ဆင်သင့်လဲ?2days ago
လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းအောင် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်မလဲ?2days ago
လုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ဖီးစီးမှုတွေ ဘယ်လိုဖြေလျော့ကြမလဲ?2days ago
How to Maintain Work life Balance?3days ago
အပြိုင်အဆိုင်များ မယ့် Covid 19 အပြီးကာလမှာ Interview ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေမလဲ?
by Kit KitOctober 29, 2020
by Kit KitOctober 28, 2020
by Kit KitOctober 27, 2020
CV ကောင်းတစ်စောင် ဘယ်လိုရေးမလဲ?
Work from home ကာလမှာ ဘယ်လိုအာရုံစိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်မလဲ?
Phone နဲ့ Interview တစ်ခုဖြေတဲ့အခါ…
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စတင်တွေ့ဆုံရာမှာ First Impression ကောင်းဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ CV တစ်စောင်က အလုပ်လျှောက်ရာမှာ First Impression ဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်ကို ဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ CV ကောင်းတစ်ခုအတွက် လိုအပ်တာလေးတွေကို Sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)...
Covid 19ကာလကြီး ပြီးဆုံးသွားရင် Companyအများစုက ထွက်သွားတဲ့ နေရာလွတ်တွေအတွက် အပြိုင်အဆိုင် အလုပ်တွေ ခေါ်တော့မှာပါ။ အလုပ်ရှာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကလဲများနေမှာ ကြိမ်းသေပါပဲ။ အဲ့တော့ အပြိုင်အဆိုင်များမယ့် Covid 19အပြီးကာလမှာ Interview ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေမလဲ? Introduction: Interview...
ပုံမှန်ရုံးသွားစရာလဲမလိုဘူး၊ On-site appointment တွေ meeting တွေ လည်း သွားစရာ မလိုဘူး ၊ ရုံး Uniform တွေလည်းမ၀တ်ရဘဲ အခုလိုအိမ်မှာအေးအေး ချမ်းချမ်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာက အိမ်မက်တစ်ခုလိုဖြစ်‌နေနိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းမှာရှိတတ်ကြတဲ့ အာရုံပျံ့လွင့်မှု တွေကို ရုံးချိန်အတွင်းမှာ မေ့ဖျောက်ဖို့...
ပုံမှန်အားဖြင့် အင်တာဗျူးတွေက လူတွေ့ အင်တာဗျူးတွေများပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့် ဖုန်းနဲ့အင်တာဗျူးဖြေရတဲ့အခြေအနေမျိူးတွေရှိလာတက်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဖြေနေတဲ့ အင်တာဗျူး ပုံစံမျိူးမဟုတ်တဲ့ အတွက် လွဲချော်မှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခုလို Covid ကာလအတွင်းမှာ ဆိုရင် Company တော်တော်များက ဖုန်းအင်တာဗျူးကို အလေးထားအသုံးပြုလာကြပါပြီ။...